Naghachi Nexus 4 Echefuola ma ọ bụ ehichapụ Foto na Videos bú
> Resource> Naghachi> Nexus 4 Data Naghachi: Naghachi Nexus 4 Echefuola ma ọ bụ ehichapụ foto na vidiyo
Olee otú naghachi ehichapụ ma ọ bụ Echefuola Data si Nexus 4?
Ndị ọhụrụ Google si Nexus-abụọ Android ekwentị "Nexus 4" a tọhapụrụ na nso nso. Na ya elu definition ngosi, 8-megapixel n'azụ igwefoto nakwa dị ka ọhụrụ Android 4.2 OS, Nexus 4 bụ a zuru okè obere media center. Na ya, ị nwere ike mfe emikpu onwe gị n'ime yi ntụrụndụ ụwa. Otú ọ dị, ọ bụ ka-apụghị izere ezere ida faịlụ dị ka photos, vidio, na music si Nexus 4 ruru mberede l nhichapụ.
Mgbe o zutere faịlụ ọnwụ mbipụta, ị ga na ewere mfe mbụ. Niile i nwere ime bụ ịkwụsị iji gị Nexus 4 ma na-achọta otu pụrụ ịdabere na Nexus 4 data mgbake software iweghachi gị furu efu faịlụ dị ka ngwa ngwa dị ka i nwere ike. A bụ m nkwanye: Wondershare Photo Recovery, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac. Site n'enyemaka nke a usoro, ị nwere ike effortlessly naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ photos, video na music si gị Nexus 4. na enyemaka nke ya ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na mfe na-eji mma, ị ga-ahụ data mgbake bụ agaghịkwa a ọrụ siri ike.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Nexus 4 Data Recovery inwe a-agbalị. The ikpe mbipute-enyere gị aka ịhụchalụ faịlụ n'ihu mgbake na ego ma hụrụ faịlụ ndị ihe ị chọrọ iji naghachi ma ọ bụ.
3 Nzọụkwụ ịrụ Nexus 4 Data Recovery
Na-esonụ, anyị na-aga na-agwa otú iji Nexus 4 Data Recovery naghachi faịlụ. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko gbalịa na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị Nexus 4 na kọmputa na ẹkedori Wondershare Photo Recovery
Wụnye Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị. Na mgbe ahụ jikọọ gị Nexus 4 na kọmputa na iji eriri USB. Ẹkedori usoro ihe omume ị ga-ahụ ihe interface nke na-egosi ntụziaka nke faịlụ formats na ngwaọrụ akwado. Pịa "Malite" na-amalite Nexus 4 foto ma ọ bụ video mgbake.
Cheta na: Biko n'aka na gị Nexus 4 nwere ike achọpụtara dị ka a mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Malite ike iṅomi gị Nexus 4
Adịghị anya ị ga-ahụ ihe interface dị ka oyiyi egosiputa n'okpuru. Biko họrọ gị Nexus 4 si mbanye ndepụta na pịa "iṅomi" ịchọ furu efu foto na vidiyo.
Cheta na: I nwekwara ike pịa "iyo Nhọrọ" nụchaa Doppler.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake Nexus 4 data selectively
Mgbe ịgụ isiokwu Nexus 4, niile recoverable faịlụ ga-edepụtara ke 3 ige: "Audio", "Photo" na "Video". Ịnwere ike ihuchalu mbụ ọdịnaya. Mgbe ịlele faịlụ ị chọrọ iji naghachi, ị nwere ike pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ n'ụzọ kwụ ọtọ n'ime gị Nexus 4. Ma, mgbake nwere ike ada. Biko azọpụta ha ka gị na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
1 Mgbe agbake faịlụ na a usoro, ị nwere ike ịzọpụta scanned ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi hụrụ faịlụ n'oge mgbake usoro.
2 Nke a na usoro bụghị nanị a Nexus 4 data mgbake ngwá ọrụ. Na ya, ị ga-enwe ike naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ site na kọmputa gị, ndị ọzọ ekwe ntị na a dịgasị iche iche nke mpụga nchekwa ngwaọrụ.
Video nkuzi nke Nexus 4 data mgbake